လိမ်နည်း တစ်မျိုး လိုင်းပေါ်မှာ အခု ခေတ်စား နေတဲ့ အကြောင်းကို သေချာ ပြောပြကာ သတိပေးစကား ဆိုလာတဲ့ ဆောင်းယွန်းစံ…. – Shwe Naung
လိမ်နည်း တစ်မျိုး လိုင်းပေါ်မှာ အခု ခေတ်စား နေတဲ့ အကြောင်းကို သေချာ ပြောပြကာ သတိပေးစကား ဆိုလာတဲ့ ဆောင်းယွန်းစံ….
သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက် အဖြစ်ရပ် တည်နေတဲ့ ဆောင်းယွန်းစံ ကတော့ ရုပ်ရှင် နဲ့ ဗီဒီယိုတွေ ရိုက်ကူး ထားသူဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ဆိုရင်တော့ ဇာတ်လမ်းတွဲ တွေမှာ ပါဝင် ခဲ့တာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိ မှာတော့ ဆောင်းယွန်းက ပြည်သူ တွေနဲ့ တစ်သားတည်း ရပ်တည်ကာ စားဝတ် နေရေး ခက်ခဲနေတဲ့ ပြည်သူ များကို စေတနာရှင်များနဲ့ စုပေါင်းကာ အလှူ အတန်းတွေ ပြုလုပ် နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူမရဲ့ ပြည်သူ ပရိသတ်တွေ အားလုံး အဆင်ပြေ ကြစေရန် အတွက် ဘဏ်နဲ့ ပက်သက် တဲ့ သတင်းအချက် အလက်တွေကို တင်ပေးနေတာလည်း တွေ့ ရပါတယ်။မကြာသေးခင် အချိန်က လည်း သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာထက်မှာ အခု လိုင်းပေါ်မှာ ခေတ်စားနေတဲ့ လိမ်နည်းတွေကို ပြောပြ ပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ညီမလေး တစ်ယောက်က အလိမ်ခံလိုက် ရတာမို့ တစ်ခြားသူတွေ ထပ်မ ဖြစ်စေဖို့အတွက် သူမကို အကူအညီတောင်းလို့ ပရိသတ်တွေကို သတိပေး​ စကားဆို လာတာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။
“ခုလိုင်းပေါ်မှာ ခေတ် စားနေတဲ့လိမ်နည်းတစ်ခုလေး..စဘော်ပေးပီး ငွေချေးပေးတယ်ဆိုတာလေ..ခု ကာလမှာ ကိုယ်နဲ့ရင်းနှီးခင်မင်တဲ့သူကိုတောင် ငွေချေးပေးဖို့ အရမ်း ခက်ခဲနေကြတာ..လိုင်းပေါ်မှာ မှတ်ပုံတင် လေးပြရုံနဲ့ ငွေချေးပေး မယ်ဆိုတာ​ြဖစ်နိုင်ပါ့မလား..
တကယ် ချေးပေးတယ် ဆိုရင်တောင် ငွေပေးငွေယူ မယုံကြည်ရတာကို..၁၀၀ မှာတစ်ယောက် တောင် ဒီလို ရူးနှမ်းတဲ့အလုပ်မျိုး လုပ်မပေးလောက်ဘူး..အဲ့တော့ ချင့် ယုံကြပါနော်..ခု ညီမလေး တယောက် သူ့အဖေ နေမကောင်းလို့ ဆေးခန်း ပြချင်လို့ လိုင်းပေါ်က စပေါ်ပေးရမယ်
တစ်သိန်းကို တစ်သောင်းလွှဲ ရမယ်ဆိုလို့ လွှဲပေးလိုက်တာ..ခုလိမ် သွားပါ တယ်တဲ့.. အဲ့ညီမလေးက သူ့လိုအ​ြဖစ်မျိုး တစ်ခြားသူတွေ​ြဖစ်မှာဆိုးလို့ ဆောင်းယွန်းကို အကူအညီ တောင်းလို့ ပြောပြပေးတာပါ.. ဘယ်သူ့ ကိုမှ မယုံပါနဲ့.❌❌
လိမ်တဲ့ သူတွေက နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ လိမ်နေကြတာပါ..အလုပ်​​ပေးမယ် ဆိုတိုင်းလဲ မယုံပါနဲ့ .သေချာလေ့လာစုံစမ်းပြီးမှ လုပ်ကြပါနော်….”ဆိုပြီး ရေးသားမျှ ဝေပေးလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။အခုလို ကာလမှာ လိမ်တဲ့သူတွေ များလာတာ ကြောင့် ပြည်သူတွေ အရာရာကို သတိထား ဆောင် ရွက်ကြပါနော်……
Photo Credit- Saung Yoon San FB Account
ခြူးလေးရဲ့ အမိုက်စား TIK TOK ဗီဒီယို…..
မော်ဒယ်လ် သင်းရတီခင်ရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ……
စူးရှထက်ရဲ့ ရင်ဖိုဖွယ် ဗီဒီယိုလေး….
ကင်းမရွာ လေးကို ကိုယ်တိုင် သွားရောက်ကာ မီးဘေးဒဏ်ခံထားရ တဲ့ပစ္စည်းများနဲ့ စားနပ်ရိက္ခာတွေကို လှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ ဖြူဖြူထွေးရဲ့ ဗီဒီယို….
အဖြူရောင် ဇာလေးဝတ် ပြီး တော့ အရမ်းလန်း တဲ့ ဝတ်စုံလေး နဲ့ ဆက်ဆီ ကျကျ ပိုစ့်တွေ ပေးနေ တဲ့ မော်ဒယ် ဖူးပွင့်ခိုင် ရဲ့ VIDEO….
မိုးရွာရင် မိုးရေချိုးမယ် မေမေ လာရင် နို့စို့မယ် 🍼 ဖေဖေ လာရင် အုန်းသီးခွဲစားမယ် 🥥မိုးရေထဲမှာ ထွက်ဆော့ရတာကို ကြိုက်တယ် အလှတရားတွေ ထုတ်ပြလိုက်ပြန်တဲ့ ရှင်ယွန်းမြတ်…
စာချုပ်ချုပ် လိုက်နိုင်ပြီတဲ့ လန်ဒန်က မော်ဒယ် အေဂျင်စီတစ်ခု နဲ့အလှမယ် သူဇာဝင့်လွင်…
မြစ်ထဲကို ငါးခူတွေလွှတ်ပြီး အမြန်ဆုံးပြန်လည် လွတ်မြောက်စေဖို့ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံထားရတဲ့ သူတွေ အတွက် ဆုတောင်း ပေးနေတဲ့ နေခြည်ဦး…